Ngentwasahlobo, ngokukhawuleza ukuba ilanga libuhlungu, amanye amantombazana kunye nabasetyhini baye baxhamla kwesikhumba. Abanye abantu bayakuvuyela ukubonakala kwabo, kwaye abanye, ngokuchaseneyo, bayaxhalaka. Kodwa, ke, akufanele udideke ngale nto. Okokuqala, unokukwazi ukuwucima ngokulula kwaye kulula, kwaye okwesibini, i-freckles - ayisoloko isisiphene esikhombathini-ngamanye amaxesha inika imbonakalo yakho inqabileyo, kwaneyokuqala. Ngoko, umxholo wanamhlanje ngu: "Ukunyamekelwa kwesikhumba ngeendidi ezininzi."
Okokuqala, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukubonakala kweenkontila kulula kakhulu ukukhusela kunokuziphatha ngokuzayo. Ngelinye igama, ukuba uhlobo lunikezele ngeendidi ezininzi, ngokokuqala, kufuneka uqaphele, ngokukodwa malunga nokuba phantsi kwelanga. Ngamafutshane, indlela engcono yokulwa nama-freckles kukukhusela ulusu kwilanga elithe ngqo. Ingakumbi ixhalabisa loo maxesha xa 'uthatha ilanga lokuhlambela' ukuze utyumle. Ngesikhumba kunye nama-freckles kukulungele ukutshisa ilanga kude kube yinyanga yeshumi nanye ekuseni. Ngendlela, sincoma ukuba lingabikho ukulala, kodwa kuhamba. Oku kuya kukunceda ukuba ugweme ukufumana imimoya eqondileyo ebusweni bakho kwaye ube ngumncedisi wokulwa neentlobo ezininzi. Kwaye makhe sijonge ezinye iingcebiso ezisebenzayo zokunakekelwa kwesikhumba kunye namaqela amaninzi.
Ukunyamekelwa kwesikhumba kunye nama-freckles, okubonakala ngokuphawulekayo entwasahlobo nasehlotyeni, yinto enobunzima kakhulu. Siza kuqala ngokuthe ngqo kwiimveliso zokuzicoca, okuthi, nakanjani, akufanele zisetyenziswe kule meko. Musa ukuthenga i-tonic, i-lotions okanye amanzi angasese angaseseli naliphi na indlela. Imveliso yokunakekelwa kwesikhumba enyukisayo iya kwandisa ububele bayo kwaye yenze kube nzima ukukhanya kwelanga. Ukuba emva kokusebenzisa le nto okanye ukulungisa ukulungelelanisa kwesikhumba, amabala okuvuvukala, kwaye uqala ukuva ukukhathazeka kwezi ndawo, ngoko kufuneka udibanise isikhumba ngekhilimu omuncu okanye wenze i-lotions kwiindlela ezifana ne-chamomile, i-mint kunye ne-tea emnyama emnyama (itiye kufuneka kungabi naliphi na izongezo).
Indlela efanelekileyo yokulwa neendidi ezininzi ziza kuba ziimpawu zokukhusela njengoko kufaka isicelo ebusweni ngaphambi kokuba uphume ngosuku olukhanyayo ilanga elingabonakaliyo lokukhanya kwelanga okanye isithintelo somthunzi omnyama - yile siseko esithintelayo esenza ulusu lukwazi ukukhanya kwelanga.
Ukuba i-freckles "isabamba" isikhumba sakho, kufuneka usule isikhumba kabini ngosuku nge-kefir okanye i-yogurt, ijusi kwi-lemon esanda kumiswa okanye ijusi ye-anyanisi. Oku kubandakanya i juice yevilfruit kunye neklabishi emuncu. Yonke le mveliso ingezantsi kwinani lamagunya okuhambisa i-bleaching agents kunye nokuqinisekisa ukunakekelwa kwesikhumba kulolu hlobo. Kwakhona ukunyamekela kwesikhumba nge-freckles kuya kuba kusetyenziswe imaski ephuma kwi-pulp ye-ikhukhamba entsha, i-tomato, i-strawberry okanye i-currant ebomvu. Ezi maski kufuneka zenziwe imihla ngemihla kwaye zigcine imizuzu eyi-15, uze uhlambulule ngamanzi afudumeleyo. Ezi zihlamba zinemiphumo emihle. Kwakhona ungabandakanya imaski yemvubelo ne-hydrogen peroxide. Ngama-gramu ayi-100 yemvubelo, yongeza isiqingatha sepasipuni ye-peroxide. Emva koko, xuba konke kwaye usebenzise ebusweni ngemizuzu emi-5-8, uze uhlanza ngamanzi afudumele. Le maski yanele ukwenza kanye ngeveki.
Kwakhona kwesikhumba esilungelelanisa kwii-freckles, ungathenga ukhilimu okhethekileyo. Kodwa apha kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ezi zidumba akufanele zisetyenziswe ebusweni ukuba uya kuphuma kwisitalato. Oku kunokubangela ukwanda kwesikhumba okanye ukucaphuka. Ezi zigrama zisetyenziselwa isikhumba sokuhlanjululwa kwangaphambili sobuso, kwaye emva kweyure nesiqingatha zisuswe nge-napkin enomanzi engenazo utywala. Kungcono ukuyisebenzisa ngaphambi kokulala, ngoko uqinisekile ukuba awuyi kuhamba naphi na.
Ukususela kwimveliso yokunakekelwa kwesikhumba kunye noluntu, kuyafaneleka ukugqamisa ukupheka okulandelayo, okulula kwaye kufumaneka ukupheka nokusetyenziswa ekhaya.
Ukunyamekela kancinci kwesikhumba kunye ne-freckles kuhlamba ubuso kusasa nangokuhlwa ngamasi omuncu. Leli phephelo lesintu sasendulo lihlolwe ngabagogo kunye nogogo-makhulu, ngoko ke kufuneka kusebenziswe.
Kwakhona nantsi i-lotions ye-bleeding, zokupheka esikunikezela kule nqaku. Ezi zincinci ungazipheka ekhaya ngaphandle kwenzame.
I recipe yileyokuqala. Siza kuyimfuneko: 6% - ipesenteji ye-actic acid, ijusi ukusuka kwi-lemon echazwe ngokutsha kunye namanzi abilisiwe.
Ukulungiselela: Thatha isipuni esisodwa se-6% - iipesenti ze-actic acid, njengomso wokumisa i-lemon, udibanise uze ungeze ezimbini iibheypuni zamanzi abilisiwe. Hlanganisa kwakhona. Ukuba isikhumba sakho sithandekile ukuba some, ngoko kufuneka udibanise amaconsi ambalwa e-glycerin kwisisombululo. I-lotion ikulungele. Lo lotion udinga ukusula ulusu lobuso malunga namaxesha amabini ngosuku.
Iresiphi yesibini . Sidinga izithako ezinjenge-parsley kunye namanzi aqhelekileyo abilayo.
Ukulungiselela: ngokukhawuleza usike i-parsley eluhlaza, udinga malunga neetapuni ezimbini zemifuno. Emva koko uthele le parsley ecocekileyo nge-200 milliliters (enye iglasi) yamanzi abilayo. Emva koko sibeka isisombululo sethu kwieyure ezintathu. Xa ifakiwe, kufuneka utyumle kwaye xa ipholile, ungasula ubuso bawo. Le lotion idinga ukusula ulusu lobuso malunga nezihlandlo ezimbini okanye ezintathu ngosuku. Gcina limi kwindawo epholileyo.
Ezi zinto zidibanisa kakuhle i-bleach kwesikhumba, ejongene nokubonakala kweentlobo, kunye nokuphucula umbala wayo kunye nokutya.
Kwaye ekugqibeleni ndifuna ukongeza ukuba ukusetyenziswa kwezi zikhankanywe ngasentla akuyi kunika umphumo osheshayo. Kodwa emva kweenyanga ezimbalwa uza kuphawula ukuphucuka okukhulu ekubonakaleni kwesikhumba sobuso kunye nokwehla kwenani leentlobo. Inhlanhla kuwe!
Ukhilimu lwasekhaya ukusuka kwi-pigmentation
Ukutya "6 amapilisi"
Isobho se-egg kwindlela yamaRoma
Cinga abadlali bakho abathandayo kwindima yeSanta Claus: Ngaba unokufumanisa ukuba ubani ofihla emva kweendvuvu?
ISingapore - isixeko seNkunzi namanzi olwandle
Kunokuba i-tshokoleta incedo
Isitya sokutya kwiTable yeNtsha
Ungalungiselela njani ukuzaliswa kokuzaliswa?